Iza moa i Don Gato, ilay biby mahatoky ao Auronplay | Noti saka
Encarni Arcoya | | Saka malaza
Very ny biby fiompy, rehefa niaraka taminy nandritra ny andro, herinandro, volana na taona maro ianao, dia toe-javatra mampalahelo izay mampihena ny olona tia biby rehetra. Ary amin'ity tranga ity, rehefa lasa malaza be ireo tantara ireo, vao mainka izany. Auronplay dia nanambara tamin'ny 26 aprily 2021 fa ny biby fiompy mahatoky, Don Gato, dia maty noho ny aretina.
"Kivy tanteraka aho ary tamin'izay fotoana izay dia feno fahatezerana sy fahatezerana", izany no teny navoakan'ny youtuber tao amin'ny Twitter momba ny fahafatesan'ny sakafony. Fa iza moa i Don Gato? Ahoana ny fiarahan'ny fiainana anelanelan'ny Auronplay sy ny saka? Hilaza aminao izahay avy eo.
1 Iza moa i Don Gato
2 Nanao ahoana ny ain'ny biby fiompy Auronplay
Iza moa i Don Gato
Don Gato dia saka mainty manana maso maitso. 8 taona izy ary mascot an'i Auronplay. Miaraka amin'i Roma, biby fiompy iray hafa, dia nilalao tamin'ny horonantsary nalefany tsindraindray izy ireo, na nanelingelina azy, na koa nahatonga ny youtuber handray anjara.
Noho izany, ireo mpanaraka dia nahafantatra ny fomba niainan'ity lahin-jaza ity niaraka tamin'ny youtuber, sy ny fomba nifalian'izy roa tao an-tranony tany Andorra.
Tonga tamin'ny fiainany i Don Gato tamin'ny Novambra 2013. Ny sariny voalohany, tao amin'ny Instagram, dia navoaka tamin'ny 7 Desambra 2013, raha mbola zazalahy kely izy. Raha ny marina, ny fakantsary sy izy dia nifandray akaiky foana. Ary izy koa dia nizara tamina horonantsary fampisehoana iray izay nanolorany ny mpanaraka azy tamin'ny biby fiompy vaovao, saka kely izay saika tafiditra amin'ny felatanany, mainty, nilalao nefa manam-paharetana tokoa tamin'ny nitondrany azy io.
Efa nanontany an'i Auronplay ve ianao hoe inona no hataony raha afa-mandositra i Don Gato ary namaly izy hoe: Enga anie ka tsy hisy izany. Fa raha izany no mitranga dia latsaka anaty fahaketrahana aho. Hitomany mandritra ny 3 volana aho. Tsy haiko hoe ahoana no ahafahanao mitia biby be loatra.
Ankoatr'izay dia tsy maintsy niatrika fanontaniana sarotra hafa koa izy: Inona no hitranga raha maty i Don Gato? «Ny andro nahafatesan'ny saka ko, maty koa aho. Isika izay manana biby fiompy ihany no mahalala ny fanaintainana ateraky ny fahafatesan'ny biby fiompy.
Nanao ahoana ny ain'ny biby fiompy Auronplay
Don Gato dia iray amin'ireo "sakaiza" tsara indrindra an'i Auroplay. Raha ny marina dia maro no mihevitra fa Nanova ny fiainan'ny youtuber ary kintana dia kintana tamin'ny horonantsariny marobe. Raha ny tena izy, ao amin'ny YouTube isika dia afaka mahita horonan-tsary vitsivitsy izay niarahan'i Auronplay nilalao taminy, na The Adventures of Don Gato, horonantsary iray izay ilay mahery fo tsy niadian-kevitra dia izy.
Nipetraka teo akaikiny izy, niaraka tamin'i Roma, biby hafa an-tsokosoko izay ananan'i youtuber ary nokarakaraina tsara foana izy, amin'ny maha-tia biby tsara azy. Azonao atao ny milaza fa tena tia azy izy ary teo anilany foana izy, indrindra rehefa nila azy izy.
Mazava ho azy, tamin'ny tenin'i Auronplay ny tenany, ny saka dia nianatra "nandao azy" ary tsy niraharaha azy, saingy efa fantatsika fa amin'ny felines dia miteny betsaka noho ny teny izy ireo ary amin'ny horonan-tsary dia hitanao ny fahaizany mifampiresaka amin'ny alalàn'izy ireo.
Andro isan'andro an'i Don Gato Tiany ny milentika, misasa maraina ary tsy tiany ny mivoaka. Na eo aza ny fananana kilalao, scratchers sns. ny zavatra mahazatra dia teo akaikin'i Auronplay foana izy, na teo akaikiny na teo amboniny, mariky ny fitiavany.
Misy fotoana mampihomehy maro eo anelanelan'i Don Gato sy Auronplay. Anisan'ny horonantsary foana izy, na dia tsy niriany aza, satria afaka niditra tao amin'izy ireo izy nefa tsy nasaina akory, fa nanintona ireo mpanaraka kosa, izay tonga nahita azy ho protagonista iray hafa ary nanontany azy rehefa tsy hitan'izy ireo izy.
Mampalahelo, ary na dia teo aza ny Don Gato tsy dia «antitra», satria vao 8 taona monja izy, aretina iray no nahatonga azy niditra hopitaly veterinera tao Andorra ary, farany, tsy naharesy ny sary gravity.
Mandefa ny famporisihanay rehetra an'i Auronplay izahay amin'ny fotoana sarotra sy mampalahelo toa izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Saka malaza » Iza moa i Don Gato, ilay biby mahatoky ao Auronplay
Fa maninona ny saka tsy mahazo mihinana sôkôla?